महिला डक्टरको पहिलो अनुभव : पुरु`षको लि“’ङ्ग दे`ख्दा ला`ज लाग्छ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/महिला डक्टरको पहिलो अनुभव : पुरु`षको लि“’ङ्ग दे`ख्दा ला`ज लाग्छ
काठमाडौ । कुनै पुरुष आफ्नो यौ’न रोगको बारेमा स्वास्थ्य उपचार गर्न महिला डक्टरकोमा जाला ? वा महिला पुरु`षकोमा जालिन् ? पक्कै पनि आफू भन्दा बिप`रित लिं`गी डक्टरलाई यौ’न तथा प्रसुती समस्या “कमै मात्रामा जान`कारी दिईन्छ । तर डाक्टर स`मक्ष बिरामी पुग्नै पर्छ ।
सम्भव भए सम्म पुरुषले पुरुष डक्टर र महिलाले महिला डक्टर नै खोज्ने गर्छन् । डा. सृजना शर्मा स्त्री, प्रसुती तथा यौ`न रोग बिशे`षज्ञ हुन् । उनी पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र ए एण्ड बी इन्टर`नेशनल अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।
उनले आफू स्त्री, प्रसुती तथा यौ`न रोग बिशे`षज्ञ भएर पनि सुरुमा पुरुष यौ`न अं`ग देख्दा ला`ज मानेको खुला`सा गरेकी छन् । उक्त लाज मान्ने अवस्था भने युवा अवस्थाको सिकाईमा थियो । उनी भन्छिन्, अब सिक्ने कुरा र जीवनमा आवश्यक पर्ने कुरालाई ला`ज मानेर होईन सहज रुपमा लिएर सिक्नु र जान्नु पर्छ ।
उनी भन्छिन् म डाक्टर हो पुरुष बिरामी भएपनि म कहाँ आउँनुहुन्छ । आउँनुपर्छ । मैले लाज मानेर हुन्न । मेरो ज्ञान सिप नै त्यही क्षेत्रमा भएपछि मलाई पुरुष यौ`नां`गमा देखिएका समस्या हेर्न लाज लाग्दैन ।
विरामी पुरु`षहरु पनि ला`ज नमानि उपचार गराउन उनको सु`झाव समेत छ । महिला पुरुषहरु डाक्टरकै कारण वा भन्न ला`ज मानेकै कारण उपचार गराउन अस्पताल सम्म पुग्दैनन् । यसैले सचेतना बढाउन यस्ता सामाग्री सेयर गरिदि`नुहोला ।